देउवा सरकारका नवनियुक्त मन्त्री को कस्ता ? - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Homeसमाचारदेउवा सरकारका नवनियुक्त मन्त्री को कस्ता ?
देउवा सरकारका नवनियुक्त मन्त्री को कस्ता ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिद्मा बालकृष्ण खाँडले गृह, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, पम्फा भुसालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र विरोध खतिवडाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीमा भवानीप्रसाद खापुङ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्रिमा बोधमाया कुमारी यादवलाई नियुक्त भएका छन् । शुक्रबार शपथ लिएका मन्त्रीहरु को कस्ता ? पढ्नुहोस्
Previous articleविद्यार्थीले आत्महत्या गरेपछि विद्यालयका प्रिन्सिपल पक्राउ, दुर्व्यवहार गरेको आरोप
Next articleसुरक्षित यौन जीवनका लागि चार सर्त